Shina fametrahana plastika ho an'ny orinasa mpamokatra fitsapana hidraulika | Convista
Type Valve plugging
Izy io dia ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny fitsapana hydraulic amin'ny lozisialy sy fantsom-pamokarana superheater an'ny vinaingitra 25MW ka hatramin'ny 1000MW. Izy io koa dia azo ampiasaina ho toy ny fizarana fantsona aorian'ny fametrahana varingarina mpitari-dalana.
Izy io dia mandray rafitra fanamafisam-peon-tsindrina ary ny fantsom-pirazanana roa dia mandray fifandraisana mihombo.
Ny seza valizy dia misy fantsom-baravarankely tsy mitongilana eo amin'ny sehatry ny famehezana ary ny valizy valizy dia mandray ny peratra tombo-kase "O". Raha tsy misy ratra henjana dia tsy hiteraka famoahana rano ny habaka famehezana ny seza valizy ary misy ny fahombiazan'ny famehezana tsara.
Ampidiro ny valizy valizy, peratra tombo-kase "O" ary faritra hafa mandritra ny fanandramana hydraulic. Esory ny kapila volo ary apetaho toy ny fantsom-pandrefesana ny plastika fitarihana aorian'ny fitsapana hydraulic.
Mahay ampiasaina matetika, manana tombony ara-toekarena sy mety.
Previous: Valizy vavahady avo lenta ho an'ny nosy mahazatra
Manaraka: Valizy manohitra ny fikorontanana
Sivana fanodin-tànana karazana SYGL
Valaka fanalefahana ho an'ny rafitry ny rano-etona
Valizy misimisy momba ny fiarovana
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS Miorina tsara mipetraka ...